‘व्यवसाय गर्न महिलालाई परिवारको साथ चाहिन्छ’ - NepalKhoj
‘व्यवसाय गर्न महिलालाई परिवारको साथ चाहिन्छ’
नेपालखोज २०७७ माघ २८ गते १५:५४
कोरोना कहरपछि तङ्ग्रिँदै गरेका व्यवसायहरुका अवस्थाका विषयमा नेपाल महिला चेम्बरकी सचिव लिमा अधिकारीसँग नेपालखोजकी कार्यकारी सम्पादक आशा साहले गरेको कुराकानीको अंश –
महामारीसँगै अहिले बजारमा चहलपहल बढेको छ । के व्यापार व्यवसाय अहिले पुरानै स्थितिमा फर्किएको हो ?
भगवानको कृपाले हामीले कोरोनालाई जित्यौं भन्ने भनाइहरु आइरहेका छन् । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित हुनेको संख्यामा पनि कमी आइरहेको छ । यो हाम्रो लागि राम्रो पक्ष हो । विशेषगरी यो महामारीले व्यापार व्यवसायहरु विगत एक वर्षदेखि अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । अब विस्तारै व्यापारहरु सामान्य अवस्थामा खुल्न सुरु भएको छ । हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लागेकाहरुले पछिल्लो एक डेढ महिनादेखि व्यवसाय त खुले, तर पहिलाको अवस्था जस्तो भने छैन ।
सरकारले महामारीबाट प्रत्यक्ष प्रभाव परेकाहरुलाई सहुलियत दरमा व्यवसाय पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । के यो व्यवसायीले पाएका छन् त ?
विभिन्न मुलुकका सरकारले अनेक राहतको प्याकेज ल्याए । त्यसो त अर्थतन्त्रले कमजोर भएपनि नेपाल सरकारले पनि केही राहतको प्याकेज भने ल्याएकै हो । गर्भनरले तीन तहमा अति प्रभावित, प्रभावित र कम प्रभावित भनेर व्यवसाय उद्योगलाई छुट्टाउने निर्णय गरेको थियो । साथै ब्याज तिर्नका लागि समयावधि पनि लम्ब्याइएको थियो । तर, महिला चेम्बरको एउटा सेक्रेटरीका नाताले महिलाहरुको गुनासो, दुःख, कष्टहरु झेलेको मैले प्रत्यक्ष रुपमा देखेकी छु । सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज धेरैले पाउनुभएको छैन । कतिले त कोरोनापछि यस्तो गाह्रो अवस्था भयो भन्दै व्यापार व्यवसाय नै बन्द गर्नुभयो । अब हामी उठ्न सक्दैनौं, सधैँका लागि व्यापार बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो भनेर गुनासो पनि गर्नुभएको छ ।
यो अवस्थामा उहाँहरुलाई फेरी उठाउन के गर्न सकिन्छ ? तपाईहरुको संस्थाले यसका लागि कुनै योजना बनाएको छ ?
राहतको प्याकेज सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने हो । विदेशमा पनि त्यही देखिन्छ, हाम्रो नेपालमा पनि त्यही नै छ । हाम्रो जस्तो संस्थाले गर्ने भनेको थलिएका महिला उद्यमीहरुको प्रोडक्ट बिक्री गरिदिन सहयोग गर्ने हो । कोरोना महामारीका कारण ८–९ महिनादेखि प्रोडक्ट बिक्री नहुँदा उहाँहरुलाई गाह्रो भएको थियो । उहाँहरुका लागि एउटा माध्यम खोजिदिने हो । त्यसका लागि हामीले एउटा अनलाईन पोर्टलबाट महिला दिदीबहिनीहरुको प्रोडक्ट डिस्प्ले गरी बिक्री गरिदिने काम गर्यौं । कम चार्ज लिएर प्रोडक्ट बिक्री गरिदिने, बिक्री गर्न सकिने ठाउँ खोजिदिने र हामीले एक अर्काको व्यवसायमा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चेम्बरबाट चलाएका छौं ।
निजी क्षेत्रले पनि विस्तारै आफ्ना गतिविधि अघि बढाउँदै लगेका छन् । यसमा झनै उर्जा थप्न सरकारले कुनै कदम चाल्नु पर्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ?
खासमा यस्तो अवस्थामा सरकारले नै कदम चाल्ने हो । सरकारले चालेको कदमले हामीलाई पुगेको त छैन । तर, एकैपटक हामीले यूरोप, अमेरिकसँग तुलना गरेर पनि भएन । आफ्नो देशको भौगोलिक, आर्थिक अवस्थालाई हेरेर हामीले त्यो अनुसारको चाहाना राख्नुपर्छ । सरकारले यो महामारीको अवस्थामा केही भएपनि राहतको प्याकेज ल्यायो । यतिमा सन्तोष हुनुपर्छ । हाम्रो देश नै गरिब छ, आर्थिक अवस्था नै डामाडोल छ भन्ने भन्दापनि सरकारले यति भएपनि ल्यायो भनेर सन्तोष लिने ठाउँ छ जस्तो लाग्छ ।
देशमा अहिले संसद् विघटन भएको स्थिति छ । यसले व्यवसायीहरुको मनोभावमा कस्तो स्थिति सिर्जना गरेको छ ?
एउटा व्यवसायीको हिसाबले म के भन्छु भने– उहाँहरुको बाध्यात्मक स्थिति होला । म पनि कुनै पार्टीप्रति आस्था राख्छु होला । मलाई पनि केही कुरा चित्त बुझेको छैन होला, त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । तर, कोभिडले गर्दा ९–१० महिना थलिएको अर्थतन्त्र सुरु मात्रै के भएको थियो यसरी राजनीतिक झगडाका कारण फेरी अर्थतन्त्रमा असर पर्ने देखियो । एउटा पार्टीभित्रको झगडालाई लिएर जुन किसिमको अराजक, असंवैधानिक कदम चालियो यसले व्यवसायीलाई झनै गाह्रो बनाएको छ । जसका लागि चलायमान हुन सुरु भएको व्यवसाय झनै थलिने अवस्थामा पुगेको छ ।
व्यापार व्यवसाय चलायमान कसरी बनाउने भन्ने तिर ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा सरकार आफैँ लडाइँमा छ । कोभिड–१९ पछि यो जटिल अवस्थामा उहाँहरुले आफूहरुलाई मिलाउनु पर्थ्यो । देशको अभिभावकको रुपमा उभिएपछि हरेक समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । घरमा पनि झगडा हुन्छ, तर अभिभावकले मिलाउनु पर्छ । जो सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आफ्नो इगोलाई त्यागेर देश र जनताका लागि सोचिदिएको भए आज यो दिन आउँदैन थियो होला ।
यो हिसाबले देशमा फेरी बन्दका घटना दोहोरिरहने नै भयो । यस्तो अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप झनै प्रभावित हुने त होइनन् ?
काठमाडौं केन्द्रित र्याली भएको छ, तराईबाट १०–२० वटा बसमा कार्यकर्ता ओसारिएका छन् । यसले गर्दा तराईदेखि राजधानीसम्मका व्यापार व्यवसाय डमाडोल हुने भए । जाम, बन्द र हड्ताल यसले गर्दा हामीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आउजाउ गर्न सक्दैनौं, जस्तै कोही ग्राहक हुनुहुन्छ भने बन्द, हड्तालले गर्दा हामीसम्म आउनै सक्नुहुन्न । बाहिर बजारमा किनमेल हुँदैन । किनभने बाहिरको अवस्था तनावग्रस्त छ, निस्कनुहुँदैन भनेपछि बिजनेस क्षेत्रलाई त्यो एक दिनले धेरै प्रभाव पार्छ । यो कति लामो हुने हो यसप्रति हाम्रो निजी क्षेत्र धेरै चिन्तित छ । महामारी पछिको समयमा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरु एकजुट भएर जनतालाई निकास दिनुपर्ने बेला यस्तो किसिमका घटनाहरु हुनु देशको लागि ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो ।
व्यवसायमा अहिले पनि महिलाको संख्या सानो छ, महिलाहरुलाई व्यवसायमा आकर्षण गर्न सरकारले के गर्न सक्छ ?
महिलाहरुलाई सबैभन्दा पहिला परिवारले साथ दिनुपर्छ । एउटा महिला परिवारमा जन्मेको हुन्छ, हुर्केकी हुन्छन् वा कुनै परिवारमा बिवाह गरेर गएको हुन्छ । कसैकी छोरी हुन्छिन्, कसैको बुहारी हुन्छिन् । यस हिसाबले हेर्दा महिलालाई सबैभन्दा पहिला परिवारले साथ दिनुपर्छ । परिवारले तिमी जाऔं हामी छौ हामी साथ दिन्छौं केही गर भन्नुपर्छ । तिमीलाई व्यवसाय गर्न मन छ हामी पुँजी दिन्छौं ल गर भन्नुपर्छ । त्यसपछि समाजले साथ दिनुपर्छ । परिवारले साथ दियो भने समाजले साथ दिन्छ । त्यसपछि राज्यले गर्नुपर्ने कुरा राज्यले गर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा परिवार हो । म अहिले काठमाडौंमा बसेर अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु, म गाडी चढेर हिँडिरहेको छु, घरमा यस्तो सुविधा छ, मैले यतिवटा व्यवसाय गरेको छु भन्दैमा मैले मुलुकका सबै व्यवसायी महिलालाई प्रतिनिधित्व गर्दिंन । मैले खाली आफ्नो मात्र प्रतिनिधित्व गरेको छु । तर, सानो पुँजीबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नुभएका महिला दिदीबहिनीका लागि सरकारदेखि सरोकारवालाहरु सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा महिला चेम्बरको विशेष कार्यक्रम आयोजना
दुरसञ्चार प्राधिकरणको २३औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न, लोकेशन ट्रयाकिङ खोल्न सरकारलाई सिफारिस
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७०औं वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा चित्रकला तथा निवन्ध प्रतियोगिता सम्पन्न
नेपाल चेम्बरको ७०औं वार्षिक उत्सवको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल महिला चेम्बरको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न